Topic:9 Dropshipping Business Name Mistakes to Avoid
အားဖြင့် Posted: Fisayo မတ်လ 16, 2018
ဘယ်လို Dropshipping အလုပ်လုပ်
ပထမဦးစွာအရာပထမဦးဆုံးအ, သင့်ရဲ့ Dropshipping စီးပွားရေးအမည်
ဒါဟာညာဒါဟာ Get ဖို့အရေးကြီးရဲ့အဘယ်ကြောင့်
5 Dropshipping စီးပွားရေးအမည်အကြံပြုချက်များ Generate မှလျင်မြန်စွာနည်းလမ်းများ
9 Dropshipping စီးပွားရေးရှောင်ကြဉ်ဖို့အမှားအမည်ဖြင့်သမုတ်
သင့်ရဲ့ dropshipping စတိုးဆိုင်တစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်အားရွေးချယ်ခြင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အခြားအမျိုးအစားများများအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမည်အားရွေးချယ်ရာတွင်ထံမှအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်. သို့သျောလညျး, တူညီသောအခြေခံမူလျှောက်ထား, သငျသညျမှားယွင်းနေသည်အခြားအမှုအရာတွေအများကြီးနာမည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း get လျှင်အလွန်မှားပါသွားနိုင်ပါတယ်. ဒါကအခြေခံပြဿနာဖြစ်ပါသည်.
dropshipping စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအများကြီးထွက်အဲဒီမှာရှိပါတယ်, 500,000 (နှင့်ရေတွက်) တစ်ဦးတည်း Shopify အပေါ် အနှံ့ပြန့်နှံ့ 175 နိုင်ငံပေါင်း. သင့်ရဲ့စတိုးဆိုင်အမည်ဖြင့်အောင်မြင်မှု dropshipping များအတွက်လူအစုအဝေးနှင့်အနေအထားသည်သင်တို့ထံကသငျသညျထွက်မတ်တပ်ရပ်သို့မဟုတ်သင်မမြင်ရတဲ့အတွက်ရေနစ်ရှိရာနောက်ခံသို့သငျသညျရောနှောနေခြင်းနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ.
ကျေးဇူးတင်စရာ, ဒီ quagmire ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်ညာဘက်နာမည်စတိုးဆိုင်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း dropshipping ရသင်ယူဖို့စမတ်နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်.
က dropshipping စတင်ရန်ဒါလွယ်ကူသောကြောင့်, dropshippers non-စွမ်းဆောင်ရည်စတိုးဆိုင်စွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်အခြားဖွင့်ရန်စိတ်သဘောထားရှိသည်, ဒါပေမယ့်နောက်ခံပြဿနာသင်၏လုပ်ငန်းအမည်ပေးခြင်းပုံစံလျှင်, ထို့နောက်သင့်ရဲ့အနာဂတ် dropshipping စတိုးဆိုင်များအဘို့ကောင်းသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်အားအတွေးအခေါ်များ generate ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူဖို့လိုအပ်.
ဒီ post မှာတော့ငါတို့သည်သင်တို့၏ dropshipping စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအမည်အားရွေးချယ်ရာတွင်၏ ins နှင့်တနေရာစူးစမ်းလေ့လာကြမည်, ဒါပေမယ့်ပထမဦးဆုံး
အောက်တွင်အတွက် dropshipping ၏အကျဉ်းဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်5လွယ်ကူသောခြေလှမ်း:
သင်တစ်ဦး markup မှာသင့်ရဲ့လက်လီ website တွင်ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ပေးသွင်းထုတ်ကုန်ဖော်ပြရန်,
စျေးဝယ်သင်တို့နှင့်အတူအမိန့် browse နှင့်နေရာ
ပထမဦးစွာအရာပထမဦးဆုံးအ: သင့်ရဲ့ Dropshipping စီးပွားရေးအမည်
အဲဒီမှာသင်တို့ကဲ့သို့ dropshipping စတင်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကို:
PC ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop
Dropshipping ပလက်ဖောင်း, e.g. Shopify (domain name ကိုနှင့်အတူကြွလာ, စသည်တို့ကို), အခမဲ့ 14 ရက်ပေါင်းရုံးတင်စစ်ဆေး, $ 29 / mo မှာစတင်, $9/Shopify Lite ကိုများအတွက် mo
တစ်ဦးအလိုအလျောက် app ကိုနဲ့တူ Oberlo, (အခမဲ့ Starter Pack ကို), အခြေခံအထုပ်အဘို့ထို့နောက် $ 29 / mo, စသည်တို့ကို
ဒါပေမဲ့, သင်လိုအပ်အရေးကြီးဆုံးအရာတစျခုသင့်ရဲ့ dropshipping စတိုးဆိုင်ဘို့အကောင်းတစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာမည်ဖြစ်ပါတယ်.
ဒါဟာညာက Get ဖို့အရေးကြီးရဲ့အဘယ်ကြောင့်
အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, သငျသညျစာသားသုညဒေါ်လာနှင့်အတူ dropshipping စတင်နိုင်ပါသည်. ၏ဤအကြောင်းကြောင့်အချို့သောအရာတို့ကိုပေးသနားဘို့ခေါ်ဆောင်သွားကြသည်.
သငျသညျကြီးထွားနှင့်အကြေးမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့သူ၏အမှတ်တံဆိပ်အမည်ဖြင့် pre-ရက်စွဲများကြီးမားသောကစားသမားအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရဖို့ယူဆရင်းသင့်ပုံနဲ့ဆင်တူတယ်, သင်တစ်ဦးဥပဒေရေးရာ tussle ဘို့အတွက်ဖြစ်နိုင်, ထိုသို့ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်ဖြင့် related ကိစ္စများရန်သင့်ကြီးထွားလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစွန့်ခွာဖို့ပိုပြီးခက်ခဲဖြစ်လာ.
အသစ်က status ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့အားလုံးကိုသင့်ရဲ့ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုမွမ်းမံ
အဘိုးထိုက်သော rebranding အားထုတ်မှု
ရှုထောင့်၌ထားရန်, TDU မှ UTA ကနေနာမတစ်ခုအဆိုပြုထားပြောင်းလဲမှုအစီရင်ခံစာများညွှန်ပြ (အသံထွက် t-duh) Utah အခွန်ထမ်းအကြောင်းကို $ 50 ကုန်ကျနိုင် အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်.
အလားတူပင်, ဒိုမိန်း cars.com သတင်းများအရခဲ့သည် တစ်ဦးဖြတ်ပြီးဖလားကိုရယူခဲ့တာပါ $ 872m ရောင်းချ.
အခုဆိုရင်သင့် dropshipping စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်ဖြင့်လက်ျာဘက်ရတဲ့၏အရေးပါမှုကိုသိသော, ဒီမှာပါ5လှပသောလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအမည်ကိုအတွေးအခေါ်များကိုဖန်တီးရန်အမြန်နည်းလမ်းများ:
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်အဖြစ်တစ်ဦးကလုပ်ငန်းအမည်မီးစက်အွန်လိုင်းမှဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ် သငျသညျစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်အားအတွေးအခေါ်များ generate အထောက်အကူပြု tool ကို သင့်ရဲ့ dropshipping စတိုးဆိုင်များအတွက်, ဒါကြောင့်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရန်မလိုပါ.
Quora တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် လူကြိုက်များမေး&တစ်ဦးကဖိုရမ် အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်မည်သည့်ဘာသာရပ်ကိစ္စအပေါ်အဖြေကိုရဖို့ဘယ်မှာ. အဖွဲ့ဝင်များကပေးထားသောအခြားအဖွဲ့ဝင်များလက်မအထိသို့မဟုတ်ထောက်ခံမှုအဖြေကိုခွင့်ပြုထားတဲ့ upvote အင်္ဂါရပ်ရှိပါတယ်. သူတို့ကသင့်ရဲ့ dropshipping စတိုးဆိုင်များအတွက်အတွေးအခေါ်များနှင့်အတူကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
သင်တစ်ဦးမေ n 'Pop ဂီတစတိုင်လ် dropshipping စတိုးဆိုင်ကို run ဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့လျှင်, မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုထံမှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်ဖြင့်အကြံပြုချက်များရတဲ့အထဲကစတင်ရန်ပျော်စရာနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
သင်အမှန်တကယ် succinctly သင့်ရဲ့ dropshipping စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖော်ပြထားတယ်တဲ့တကယ်အေးမြ name ကိုအတူတက်အဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်.
ဝေးမိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကနေ, လူအစုအဝေးအရင်းအမြစ်ရှာသင်တစ်ဦးအခကြေးငွေများအတွက်အရည်အချင်းအလွတ်တစ်လူအစုအဝေးအနေဖြင့်ကုမ္ပဏီအမည်အားအတွေးအခေါ်များများအတွက် source ခွင့်ပြု.
တူသောအများအပြားထိုကဲ့သို့သောက်ဘ်ဆိုက်များရှိပါတယ် CrowdSpring, Fiverr, Upwork, စသည်တို့ကို.
နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအညီသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ယာဉ်တိုက်ဆိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်များကိုနားလညျနိုငျတဲ့သူကျွမ်းကျင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း copywriters သို့မဟုတ်အေဂျင်စီများကိုငှားရမ်းရန်ဖြစ်ပါသည်.
ယခုငါတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်များကို generate အချို့နည်းလမ်းတွေမြင်ကြပြီကြောင်း,
9 Dropshipping စီးပွားရေးအားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှောင်ကြဉ်ဖို့အမှားအမည်ဖြင့်သမုတ်
yeah, ငါတို့ရှိသမျှသည်အမေဇုံကြီးတွေသဘောတူညီချက်ဖြစ်ပါသည်သိ, လက်လီဖို့အဓိကပြတ်တောက်ဆောင်ခဲ့နှင့်၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုနီးပါးအရာအားလုံးမျိုချ.
သင့်အမည်အတွက်နှုတ်ကပတ်တော် Dropshipping အပါအဝင်
dropshipped ထုတ်ကုန်ပျမ်းမျှအားပိုမိုကုန်ကျမယ့်ယေဘုယျအမြင်ရှိတယ်. ဤသည်မှာအများအားဖြင့်ခက်ခဲ dropshippers တစ် markup မပါဘဲရောင်းဖို့စေသည်ထားတဲ့လက်လီစျေးနှုန်းနှင့်အရေအတွက်မှာဝယ်ယူကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို dropshipping ထည့်သွင်းခြင်း (သို့မဟုတ်ယင်း၏သည်အခြားမူကွဲ) သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်ဖြင့်သင့်ရဲ့စျေးနှုန်းတွေ ab initio အကြောင်းကိုမှားအချက်ပြမှုများပို့နိုင်ပါသည်.
DropshipTexas တူသောနာမည်တစ်ခုကိုသုံးပြီးသင်သာအတွင်းလည်ပတ်သို့မဟုတ်တက္ကဆက်ပြည်နယ်မှကယ်နှုတ်တော်မူသောအထင်အမြင်ဖန်တီးပါလိမ့်မယ်. ဤသည်တက္ကဆက်တွင်သို့မဟုတ်တစ်ဝှမ်းအသကျရှငျမအလားအလာဖောက်သည်နှင်ထုတ်မည်.
တစ်ဦး niche ပြီးနောက်သင့် Store ကိုအမည်ဖြင့်သမုတ်
တချို့က dropshipping niche အစွန်းရောက်ရာသီအလိုက်များမှာ, ဒီအခိုက်အများနှင့်လာမည့်သွားပြီ. ထိုကဲ့သို့သော niche ပြီးနောက်သင့်ရဲ့ dropshipping စတိုးဆိုင်အမည်ဖြင့်သမုတ်အလွန်ကန့်သတ်တာဖြစ်ပါတယ်, နှင့်လေးနက်သောအမှားအားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှောင်ရှားရန်.
တစ်ဦးကနာမည်ကောင်းသင်မကြာခဏစတိုးဆိုင်အမည်အားပြောင်းလဲပစ်ရန်မလိုဘဲ dropshipped ထုတ်ကုန်များ၏ကွဲပြားခြားနားသော niche ကွိုးစားခွင့်ပြုသင့်တယ်.
ဤသည်နယ်ပယ်-အမည်ပေးခြင်းကနေကွဲပြားခြားနားသည်. ကြောင့် dropshipping ရဲ့အနိမ့် startup မြို့တော်မှ, အချို့သော dropshippers တစ်နာကျင်စွာ "သေးငယ်တဲ့" စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစိတ်ဓာတ်နှင့်အတူကုမ္ပဏီအမည်ရွေး.
သင့်ရဲ့အနွယ်မှပိုင်ထိုက်သောအမည်အသုံးပြုခြင်း, လျှာသည်သို့မဟုတ်လူတွေကိုသင့်ရဲ့ dropshipping စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်အကောင်းဆုံးမဖြစ်စေခြင်းငှါ.
သငျသညျလူတို့အဘို့အခါတိုင်းနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ထုတ်ပြောပါနှင့်စာလုံးပေါင်းရန်ရှိပါက, ထို့နောက်သူကဖြစ်ကောင်းအလုံအလောက်အေးမြပါဘူး.
အခက်အခဲသင့် Dropshipping Store ကိုအမည်စာလုံးပေါင်း
သငျသညျအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Customer များလျစ်လျူရှုနေ
dropshipping သင်တကမ္ဘာလုံးရောင်းချရန်နှင့်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်မှုဝင်ငွေခွင့်ပြုသောကြောင့်, သင်သည်အခြားနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများ၌သင်တို့၏ဖောက်သည်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်.
အဲဒီဖန်စီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်ဖြင့်သင့်ရဲ့စကားထဲမှာ "ရွှေ" ကိုဆိုလိုတာများနှင့်အခြားဘာသာစကားမှာ "shit" ဆိုလိုနိုင်, အရာတို့သည်သင်တို့၏စတိုးဆိုင်ရွံရှာလိမ့်မယ်ဆိုလိုတယ်. ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့သုတေသနပြုပါ.
သင့်ရဲ့ dropshipping စတိုးဆိုင်၏အမည်စာလုံးပေါင်းရန်ခဲယဉ်းသည်ဆိုပါက, ပေးသွင်းငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးအတွက် misspell စေခြင်းငှါ, နှစ်ခုပေးသွင်းထံမှနှစ်ခုထုတ်ကုန်အဖြစ်တံဆိပ်အဘို့မကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်သည်ကွဲပြားခြားနားသင်၏နာမကိုစာလုံးပေါင်းစေခြင်းငှါ.
ကတသမတ်တည်းကို repeat လျှင်ဖောက်သည်များဟာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုကိုဆုံးရှုံးစေခြင်းငှါ. သေချာသည်သင်၏မှန်ကန်သောလုပ်ငန်းနာမည်ပေးသွင်းဖို့တင်သွင်းနေသည်.
သင့်ရဲ့ dropshipping စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်ဖြင့်ရယူခြင်းညာဘက်သင်မလိုအပ်သောဖိစီးကယ်တင်နှင့်စိုးရိမ်ပူပန်လိမ့်မယ်. ပိုကောင်းတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမည်အားသဘောတရားများကိုလာမယ့်အချိန်ကိုထုတ်လုပ်ဖို့ဤအကြံပြုချက်များကိုလိုက်နာပါ.
အာမုတ် Onwukwe အီးကောမတ်စ Insights အတွက် featured အီးကုန်သွယ်ရေး B2B / B2C Copywriter လေ့ကျင့်သင်ကြားထားတဲ့ Away ဖြစ်ပါတယ်, အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေး Nation, အီးကုန်သွယ်ရေးကိုနားလည်ခြင်း, SmallBizCub, အောင်မြင်သော Startup စာမျက်နှာ 101, စကားမပြောနိုင်သော Little ကလူသား, Huffington Post, Floship, ပထမဦးစွာရလဒ်, အဆိုပါ Next ကိုထက်တောင်ဦး, SABTrends, အနည်းငယ်ဖော်ပြ BusinessTips.Ph.
မှတ်ချက်ပေးရန်ကိုပထမဦးဆုံးဖြစ် အပေါ် "9 အားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှောင်ကြဉ်ဖို့စီးပွားရေးအမည်အမှား Dropshipping"